Somalia: AL-shabaab oo weerar culus ku qaaday gobolka Lamu ee dalka Kenya - Wargane News
Home Somali News Somalia: AL-shabaab oo weerar culus ku qaaday gobolka Lamu ee dalka Kenya
Wararka naga soo gaaraya gobolka Lamu ee dalka Kenya ayaa sheegaya in xooogag ka tirsan Al-Shabaab xalay weerar culus ku qaadeen saldhig ay leeyihiin ciidamada booliiska Kenya oo ku yaalla degaanka lagu magacaabo Pandanguo.
Weerar ayaa la sheegay in uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed intaba .
Al-Shabaab ayaa la sheegay inay weerareen islamarkaana ay burburiyeen anteennada Telefoonnada ee deegaanka taasoo meesha ka saartay sidii loo heli lahaa xog sax oo ku saabsan khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarka.
Booliiska dalka Kenya ayaa xaqiijiyey weerarka in uu dhacay waxayna sheegeen in dagaal uu socdo, ururka Al-Shabab ayaa iyaguna sheegtay mas’uuliyadda weerarkan.
Gobolka Lamu oo u dhaw xuduudda Soomaaliya ayaa ka mid ah deegaananada ay Al-Shabaab ka gaystaan weerararada oo beryihii ugu dambeeyey u badnaa kuwo loo adeegsado miinooyinka lagu aaso waddada dhinaceeda.